दुवै हात नहुने संग किन बिवाह गरेको ? माइतीले छोडेर आइज भन्छन त्यसले कसरि पाल्छ, तर म उसलाई छोड्न सक्दिन बरु मर्छु भन्छिन् एलिना ! – Khabar Patrika Np
दुवै हात नहुने संग किन बिवाह गरेको ? माइतीले छोडेर आइज भन्छन त्यसले कसरि पाल्छ, तर म उसलाई छोड्न सक्दिन बरु मर्छु भन्छिन् एलिना !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १६, २०७८ समय: १३:०९:३९